Google Chrome ichave ine subtitle system senge Live Caption mu Android 10 Android ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Google Chrome ichave iine manyorerwo senge Live Live Captions mu Android 10
Google Chrome ichave iine manyorerwo senge Live Live Captions mu Android 10, Pane chiitiko cheGoogle I / O 2019, timu ye Google yakazivisa chishandiso chitsva cheApple 10 chinonzi Live Caption, inova mhinduro inokwanisa kupa vashandisi nemhando ye otomatiki Subtitle system yeiyo odhiyo iri kutambiswa pachigadzirwa.
Rarama Caption Inoshanda ne mavhidhiyo, podcast, odhiyo mameseji uye zvimwe zvemultimedia zvemukati inoenderana uye inogona kukurumidza kuunza chimwe chinhu chakafanana muGoogle chrome, zvirinani zvinoratidza kuzvipira kutsva kwakatumirwa paChromium Gerrit.
Iyo yekusimbiswa iri mubvunzo ndeye iyo SODA (Speed ​​On-Chishandiso API) sevhisi, iyo yakakosha kune iyo rarama caption system inoshanda mubrowser uye rondedzero yacho inoreva Rarama Caption uye chirongwa chekunyora munguva iyo iyo odhiyo chaiyo inogadzirwa zvakare.
Nehurombo kwenguva iyo timu ye Google haipe ruzivo pamusoro pechinhu chitsva asi zvese zvinoratidza kuti yako kushanda muGoogle Chrome kuchave kwakafanana neiyo yatove yakaonekwa mu Android 10 kunyange zvingave zvakagadziriswa kuvimbisa vashandisi kunyangwe mikana.
Isu takamirira ruzivo kubva kuMakomo View hofori kuti tizive kuti chiiko chinonyatso kuvhura
Maitiro ekumisikidza Live Caption mu Android 10
Pane nzira dzinoverengeka dzekuita shandisa Live Caption pane Android 10. Kunyanya inokurumidza uye yakapusa kushandisa vhoriyamu kutonga. Ingo tevera matanho ari pazasi:
Fambisa vhoriyamu kudzora kumusoro kana pasi
Iwe uchaona pazasi kwechiso iyo Live Caption icon iyo inoratidzika sebhokisi rine zvinyorwa (ona skrini pazasi)
Ingosarudza iyo kuti ikurumidze kuibatidza kana kudzima
Kana yabva, inoratidza diagonal mutsetse pane icon.
Imwe mhinduro ndeye shandisa Live Caption kubva pane zvakajairika maseturu menyu, muchikamu chakatsaurirwa kuwanikwa. Bhura pasi pasi kusvikira wawana chinhu chakakumikidzwa kuRarama Caption.
Iyo Google Mubatsiri inodzivirira sei zvakavanzika zvako paApple
Instagram inoongorora Boka Nyaya: zvazviri uye mashandiro avo paApple
Google Mifananidzo inoda kuve yemagariro network: dzese nhau dzeApple
Maitiro ekumisikidza rima maitiro mune yeGoogle kunyorera yeApple